Cabsi Saakay ka jirta Degaanka Ceel-cadde Ee Gobolka Hiiraan – Gedo Times
Cabsi Saakay ka jirta Degaanka Ceel-cadde Ee Gobolka Hiiraan
30th November 2017 admin Somali News, Wararka Maanta 0
Iyadoo Shalay ay la Wareegeen Dagaalameyaasha Al-shabaab Degaanka Ceel-Cadde Ee Gobolka Hiiraan ayaa Wararka naga soo gaaraya Degaankaas waxey sheegayaan in Saakay ay ka jirto Cabsi Xoog leh oo ay qabaan Dadka Rayidka ah ee ku sugan Degaanka Ceel-Cadde.
Cabsida ayaa timid ka dib markii Magaalada Banaankeeda ay isku Aruursadeen Maleeshiyo Degaanka ah oo doonaya in ay Dagaal uga saaraan Al-shabaab Degaanka Ceel-Cadde oo Shalay Shabaabku ay la Wareegeen.
Dadka Degaanka ayaa ka cabsi qaba in ay ku Dul dagaalamaan Al-shabaab iyo Maleeshiyada Degaanka ah,iyadoo Xaaladda ka jirta Saakay Degaanka uu yahay mid ka badalan sidii hore.
Al-shabaab ayaa Difaacyo ka sameystay Hareeraha Degaanka,waxaana sidoo kale Degaanka Ceel-Cadde ku sugan Maleeshiyaadkii ka soo horjeeday Shabaab ee Shalay laga qabsaday Degaankaas.
Maamulka Gobolka Hiiraan weli kama hadlin la Wareegidda Al-shabaab ay la Wareegeen Degaanka Ceel-Cadde kadib markii ay halkaas kula Dagaalameen Dad Shacab ah oo Taageero ka helaya Maleeshiyo Degaanka ah.
Cayaarihii Gobollada ee lagu qaban lahaa Kismaayo oo Muqdisho loo soo Wareejiyay
Maraykanka oo beeniyay in dadkii lagu diley weerarkii Bariire ay ahaayeen rayid